Tag: chii chinonzi ad server
Svondo, Ndira 7, 2018 Mugovera, January 6, 2018 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Zvingaite semubvunzo wepakutanga wakanaka, "Mashambadziro anoshandiswa sei pawebhusaiti?" Maitiro acho akaomesesa uye anoitika munguva inoshamisa. Kune vaparidzi pasi rese vanopa akakodzera, vateereri vakatariswa nevashambadzi vari kuyedza kusvika. Ikozve kune kushambadzira kushambadzira pasi rese, hazvo, uko vashambadzi vanogona kunongedza, kubhidha, uye nekuisa kushambadzira. Chii chinonzi Ad Server Ad maseva ndiwo masisitimu